Mogadishu Journal » Tababaraha PSG Pochettino ayaa ku adkeysanaya ‘wax dhibaato ah’ ma lahan Messi ka dib markii la bedelay
Tababaraha PSG Pochettino ayaa ku adkeysanaya ‘wax dhibaato ah’ ma lahan Messi ka dib markii la bedelay
Mauricio Pochettino ayaa ku adkeystay inaysan jirin “wax dhibaato ah” Lionel Messi ka dib falcelintii superstar-ka Paris Saint-Germain ee beddelka intii lagu jiray kulankii ay 2-1 kaga adkaadeen kooxda Lyon ee Ligue 1.
Messi wejigiisa ayaa laga yaabay markii uu ka soo gudbay tababaraha PSG Pochettino, waxaana lagu bedelay daafaca dambeedka midig Achraf Hakimi daqiiqadii 76-aad ee ciyaarta isku dhaca.
Pochettino iyo Messi ayaa si kooban isu weydaarsaday ereyo ka hor inta uusan kan dambe, kaasoo kulankiisii ​​ugu horreeyey u saftay Parc des Princes ka dib markii uu si weyn uga soo degay Barcelona, ​​uu fariistay kursiga keydka ee saaxiibadiisa la yaabay.
Messi ayaa ku lug lahaa lix darbo (afar isku day, laba fursadood oo la abuuray) kulankii Lyon iyo kaliya Kylian Mbappe oo ka hor yimid Clermont (todobo) ayaa si fiican u maamulay kulan horyaalka ah ilaa iyo haatan xilli ciyaareedkan PSG.
Xiddiga ku guuleystay lix jeer Ballon d’Or, Messi ayaa sidoo kale taabtay 65 taabasho waxaana uu sameeyay 48 baas isagoo sax ahaa 83.3 boqolkiiba.
Pochettino ayaa u sheegay shir saxaafadeed ciyaarta ka dib: “Waxaan u maleynayaa in qof walba uu ogyahay inaan heysano ciyaartoy badan oo waa weyn, oo leh 35 ciyaaryahan.
“Waa inaan sameynaa xulashooyin, kooxda dheesha dhexdeeda ka dibna inta ciyaarta lagu jiro, maanka ku hayno waxa u fiican kooxda iyo ciyaaryahan walba.
“Mararka qaar go’aamadu waa kuwo togan, ama maya, laakiin taasi waa waxa maareeyayaashu u joogaan inay dhinac ka sameeyaan, si ay u gaaraan go’aanno. Waxay ka farxin kartaa dadka iyo in kale.
"Waxaan weydiiyay sida uu yahay wuxuuna ii sheegay inuu fiican yahay, wax dhibaato ah ma jiraan."
PSG ayaa guul ka gaartay Lyon ka dib markii uu madaxa ku dhaawacay Mauro Icardi oo bedel ku soo galay kubbad uu soo karoosay Mbappe ka dib markii rigooradii Neymar uu hore u kansalay goolkii furitaanka ee Lucas Paqueta.
Kooxda Pochettino ee PSG ayaa hadda shan dhibcood ka sarreysa Marseille oo hoggaanka u haysa Ligue 1 kaddib lix guul oo ay gaartay lix kulan.
PSG ayaa ku bilaabatay si aan fiicnayn lixdii kulan ee ugu horeysay markii seddexaad wixii ka dambeeyay 2017-18 iyo 2018-19-labada jeerba waxay ku guuleysteen inay ku guuleystaan ​​horyaalnimada.
“Aad bay noogu fiicantahay,” Pochettino ayaa ka yiri bilowgooda ololaha Ligue 1. “Kadib kulankii adkaa [kulankii Club Brugge ee Champions League], kani wuxuu noo ahaa mid muhiim ah, Lyon waa koox aad u wanaagsan oo si fiican u dheesha.
“Goolkaas waa nalaga dhaliyay qeybtii labaad, kooxda waxay u baahneyd inay muujiso dabeecad.
“Waxaan ku jirnaa xilli aan wax badan isku dayeyno, waa inaan ka shaqeynaa tababarka, laakiin waa adag tahay sababtoo ah waxaan leenahay ciyaar seddexdii maalmoodba mar, muhiimadduna waxay tahay in ciyaartoyda ay soo kabtaan.
"Waxaan sameyn karnaa oo kaliya fadhiyada fiidiyaha. Ma ahan marmarsiiyo, waxaan u baahanahay inaan horumarino."
Dayactir lagu sameynayo dhismaha 8-da Buundo oo maanta la dhagax dhigay (Sawirro)